Ukukhetha indawo elungileyo yewebhusayithi yakho kukwayila | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukukhetha isizinda kwiwebhusayithi yakho kakuhle kukwayila
Xa siqala iprojekthi yewebhu kwinkampani yethu, sikhetha imibala, umxholo, imifanekiso kunye nentengiso. Ngaphandle kokucinga, Senza uthungelwano lwasentlalweni kwaye ekugqibeleni senza idomain kwiwebhusayithi yethu kwaye yonke into ilungile. Kubonakala ngathi kulula, kodwa akunjalo.
Namhlanje, indawo yakho yokuhlala yindawo apho uphawu lwakho luhlala khona kwaye lonke ushishino lwenzeka. Ngale nto ithethwayo, kuyacaca ukuba ukukhetha igama lesizinda elifanelekileyo yinto ekufuneka yenziwe ngumnini-shishini ngamnye ngononophelo. Ukuba ukhetha engalunganga, uya kugcina ubambekile ngegama elibi lesizinda kwaye kuya kukuthatha iminyaka ukuyitshintsha. Ngenxa yokuba ukukhetha igama lesizinda elichanekileyo kubalulekile kwishishini lakho, sibuze imibuzo ebuzwa rhoqo kuye wonke umntu oqala ngaphandle.
1 Ngaba ndifanele ndithenge igama elifanayo lesizinda njengegama lam leshishini?
2 Loluphi olwandiso lwesizinda olona lubalaseleyo?
3 Ngaba ukhetho lwam lwegama lesizinda luchaphazela ukubekwa kwe-SEO?
4 Ngaba igama lam lesizinda kufuneka libalasele?
5 Ngaba igama lesizinda linokuba lide kakhulu?
Ngaba ndifanele ndithenge igama elifanayo lesizinda njengegama lam leshishini?
Akuyi kuhlala kunje. Ukuba inkampani yakho inegama elinzima, kuya kufuneka ukhethe elinye. Umzekelo: IMaderas Hermanos Serrano SL. Igama lethambeka lakho aliyi kuba: maderashermanosserranosl.es okanye maderasheramnosserrano.es. Ungabhideka okanye ungazazisi kakuhle xa kuziwa kwi-SEO. Kodwa, nangona kungeyomfuneko, uya kuhlala ufuna ukukhangela igama lesizinda elifana negama lenkampani yakho ebhalisiweyo. Oku kuyakwenza lula kubathengi bakho ukuba bakukhangele kwi-intanethi. Kule meko, cinga (iMaderas Hermanos Serrano SL) siyibiza ngokuba: maderaserrano.es okanye brotherserrano.es.
Loluphi olwandiso lwesizinda olona lubalaseleyo?
Nabani na oya kucinga nge .com okanye .org domain, icacile. Kuba zithandwa kakhulu kwihlabathi liphela le-intanethi. Kodwa oku kunokuba yinto engenampumelelo, kuba kusetyenziswe imimandla emininzi eneziphelo. Ke kuya kufuneka ukhangele enye into. E-Spain ii-.es zixhaphake kakhulu, ezinokuba luncedo kwishishini laseSpain. ezinje nge .co.uk ye-Great Britain okanye .co yeColombia. Phakathi kwamanye amaninzi kumashishini esizwe.
Ngaba ukhetho lwam lwegama lesizinda luchaphazela ukubekwa kwe-SEO?
Ngokubanzi, Ukukhetha imicimbi yegama xa isiza kwi-SEO, kodwa mhlawumbi kungabi njengoko unokucinga. Yayiyingxaki enkulu kwixesha elidlulileyo, kodwa namhlanje, unokukhuthaza iwebhusayithi yakho nge-SEO, nokuba akukho gama liphambili kwigama lakho lesizinda. Eyona nto ibaluleke ngakumbi kukuba newebhusayithi esemgangathweni (esiza kuthi sikwazi ukuyichaza elandelayo isikhundla) ukuba abathengi bakho bonwabele. Okwangoku, unokuzuza okuninzi ngokongeza indawo okuyo kwigama lakho lesizinda, ngakumbi ukuba uneshishini elincinci lendawo.
Ngaba igama lam lesizinda kufuneka libalasele?
Enye yezinto oya kuhlala ufuna ukuzenza xa ujonga igama kwiwebhusayithi yakho kukujonga ukuba umntu sele elisebenzisa elo gama. ezithile okanye ezifanayo. Ukujonga igama umntu esele enamalungelo phantsi kwakhe kunokukufumanela zonke iintlobo zeengxaki. Isenokukuxabisa imali eninzi. Kungenxa yoko le nto kuhlala kucetyiswa ukukhangela amagama afanayo kwiwebhu kwakamsinya nje ukuba unoluvo lokuba ufuna igama lakho lesizinda libizwe njani. Ngethamsanqa, kukho iingcali onokuthi uthenge iindawo ezingabizi kakhulu, ezinokukunceda ufumane igama elikhethekileyo kwiwebhusayithi yakho.
Ngaba igama lesizinda linokuba lide kakhulu?
Unga. Ngethuba nje uhlawula inkampani yesizinda, ungasetha nayiphi na igama oyifunayo. Lithuba elingaphantsi lokufumana ikopi. Ewe kunjalo, mancinci amathuba okuba afumaneke. Inkampani kufuneka ikhethe igama elifutshane nekulula ukuliqonda (jonga umzekelo kaGoogle.es, Facebook.com, njl. kubathengi bakho, ke baya kuhlala beyikhumbula kwaye bayifikelela rhoqo. Ngokolunye uphononongo igama elifanelekileyo ngoonobumba aba-8 ubude. Nangona sisazi ukuba igama elinjalo alinakusoloko lifumaneka, kodwa kuyacetyiswa ukuba ulithathe njengesalathiso. Ukuseta iideshi kunye nezinye iisimboli kwenza ukuba kube nzima ukukhumbula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukukhetha isizinda kwiwebhusayithi yakho kakuhle kukwayila
Ukuncamathela ezidolophini yenye indlela yokupeyinta
UWacom unescreen esitsha, i-Cintiq Pro 24-intshi yokubonisa